Xog+Dhageyso: Maxaa ka soo baxay kulankii Madaxweyne Farmaajo & Xildhibaannada
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay Xafiiskiisa Magaalada Muqdisho kula kulmay Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanadan oo tiradoodu ay gaareysay 60 Xildhibaan ayaa waxay Madaxweynaha kala hadleen arrimaha doorashooyinka ee dalka, iyagoona ka dalbaday inuu dhiirageliyo, sidii ay dalka uga qabsoomi laheyd doorasho qof iyo cod ah.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa Xildhibaanada uu qaabilay Madaxweyne Farmaajo ayaa faah faahiyay waxyaabihii looga wada hadlay kulankaasi.
“Kulanka waxa uu ahaa mid wax is weydiin iyo wax isu sheegid la xiriirta nidaamka dastuuriga ee dalka iyo shuruucdiisa, dhaqangalkeeda iyo hawlaha la xiriira doorashooyinka dalka iyo waxa markaasi kaga aadan fulinteeda Goleyaasha Dowladda iyo Madaxweynaha oo isagu ah ilaaliyaha sharciga.” Ayuu yiri Prof. Maxamed Cumar Dalxa.
Xildhibaan Dalxa oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da lana weydiiyay waxa kulmiyay iyagoo Xildhibaano intaasi gaaraya ayaa ku jawaabay, “Waxaa isugu kaaya keenay anagoo hal shacab, hal ummad iyo halqaran ka wada tarjumeyno, oo waxa anaga hawshayada ay tahay ku dhaqanka iyo ilaalinta sareynta sharciga, oo aan la wadaagno Madaxweynuhu ayay ahayd. Xaaladda dalka lagu jiro iyo sida looga fadhiyo in xad-gudub iyo aano aysan imaanin, waxa la yiraahdo qalalaaso dastuuri ama in xeerkii iyo sharciyadii wadanka isku hayay inaanan noqonin wax hadda iyo wixii ka dambeeya mad madow soo gala, iyadoo beryahaan dambe waxyaabo fara-badan oo umadda ay is weydiinayaan iyo tuhumo fara-badan ay soo baxayaan, iyadoo Baarlamaanka iyo wixii go’aan iyo sharci horey uu u gaarayna, sidii iyada loo dhaqangelin lahaana looga fadhiyo.”
Su’aal ahayd waxa ka soo baxay kulankaasi oo la weydiiyay ayuu sheegay inay ka soo baxday inaanan la faragelin shuruucda uu meel mariyay Baarlamaanka Soomaaliya, ee ku aadan arrimaha doorashooyinka, isla markaana aan dheg jalaq loo siinin ololaha ay Maamul Goboleedyada ugu jiraan, sidii dalka ay uga qabsoomi laheyd doorasho dad-ban.
Xildhibaanadan 60-ka ah ayaa waxay u ololenayaan, sidii ay dalka uga qabsoomi laheyd doorasho qof iyo cod ah, taasoo sida muuqataba ay aad u adag tahay in xilligan ka dhacdo dalka.
Isku soo wada-duub, Kulankan ayaa uu ku soo beegmaya, xilli Arbacadii shalay uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu si adag uga horyimid qorshaha, ay Maamul Goboleedyada ku doonayan in doorashada ay noqoto mid dad-ban.
Halka hoose ka dhageyso Wareysiga Xildhibaan Dalxa oo dhammeystiran:
Tags: doorasho dad-ban, kulan, Madaxweyne Farmaajo, qof iyo cod, Xildhibaanno
Kenya resumes local flights after COVID-19 suspension
RW Kheyre, Laftagareen iyo Waare oo gaaray magaalada Garoowe +(SAWIRRO)